विमिथीकरणको योगफल ~ जोगी जिन्दगी
11:09 PM पैताला डायरी, समीक्षक, समीक्षा No comments
शास्त्रीय भौतिकवादीले मानेको टाउकोको सत्य अथवा ज्ञानेन्द्रिय सत्य, औद्योगिक क्रान्ति, औपनिवेशिक सन्दर्भ, विसंगतिवादी दृष्टिकोण, मानवीय त्रास, विश्वयुद्धहरू आदि सन्दर्भ पछि गर्धनबाट छाती वा हृदयमा ओर्लियो । माक्र्सवादी बहसले सत्यलाई हृदयबाट पेटमा झार्‍यो । भोकाएका र अघाएका बीचको द्वन्द्वात्मक स्थितिमा सत्यको खोजी भयो । यसपछि सिग्मन्ड फ्रायडले सिर्जनात्मक सत्य यौनांगमा अल्झेको हुन्छ भनिदिए । यसरी लिबिडो सत्यको अन्तिम अध्याय बन्यो ।
त्यसपछि पूर्व तथा पश्चिम दुवैतिर मौन रह्यो । यौनांगभन्दा तल सत्य ओर्लिएन । त्यो सत्यताको 'भ्याकुम'लाई चिर्ने दुस्साहसको मुख्य योजनाकार बने- गनेस पौडेल । यो उनको दाबी हो । उनले फ्रायडलाई सोध्दै नसोधी सत्यलाई पैतालामा झारिदिए । मानव सभ्यताको जग टाउकोबाट होइन पैतालाबाट सुरु भएको हो भन्ने दाबीको 'साक्ष्य' बने । यसलाई स्थापित गर्न उनले ३६३ पृष्ठको उपन्यास तयार गरे । नाम रह्यो गनेस मेनोफेस्टो अर्थात् पैताला ।
'पैताला' अध्यात्म, ज्ञान र विज्ञानको अनेकन प्रयोगमा अल्झिएको रहस्यको पुञ्ज हो । पौराणिक सञ्जीवनी विद्यालाई व्रणतुकाका माध्यमबाट कच उर्फ सामसोनको सपनाबाट चोर्न लगाइनु मिथकीय पुनर्सिर्जन हो । शुक्राचार्य र वृहस्पतिको आ श्रमलाई चितवन र पोखराका तलैयामा इन्जिनियरिङ गरेर गनेसले कच-देवयानी प्रेमलाई विमिथिीकरण गरेका छन् । पूर्वीय र पश्चिमेली मिथकका अनेकन किस्सालाई लेखकले घरि भत्काएका छन्, घरि पुनर्निर्माण र पुनव्र्याख्या गरेका छन् । पैताला खसोखास विमिथीकरणको योगफल हो ।
कथाकारसँग सामसोन र डेलिलाह अथवा माक्सोती उर्फ समृद्धि र उत्किलन विकको प्रेम कहानीमात्र होइन फोटोसँग विवाह गर्दै फोटोलाई नै सुम्सुम्याउन विवश सुकलालका डायरीहरू पनि छन् जसका माध्यमबाट लाहुरे संस्कृति र त्यसले मान्छेको यौवनमा पारेको असरको सुन्दर वर्णन गरिएको छ । सुकलाल आफ्नो डायरीमा पोखिन्छ, 'लाहुरेहरूले समय, सीप र इमानदारी मात्रै कहाँ बेचेका हुन्छन् र ? रहरहरू पनि त बेचेका हुन्छन् । बैंस पनि त बेचेका हुन्छन् ।'
आख्यानमा सामान्य लाग्ने जीवन र जगत्का किस्साहरूलाई कल्पनाको उच्च उडानमा उचालेर कथा-लोकका आदिम क्यारेक्टरहरूमा छोडिएको छ । पात्रहरू परालौकिक भए पनि ती सबै कहीँ न कहीँ लौकिक धरातलकै नोस्टाल्जिक प्रतिविम्बहरू हुन् । जीवन र जगत्का ज्ञात-अज्ञात भ्रामिक सत्य हुन् । जादुमय यथार्थ हुन् । क्यारेक्टरले उभिएको भू-स्पेस 'मिस्टरियस' जरुर छ परन्तु उनीहरूले बाँचेको जीवन 'सिरियस' छ । जैविक र भौतिक आवश्यकतामा उनीहरू चल्मलाएका छन् । पहिचान र प्रभुत्वको खोजीमा दिन बिताएका छन् । यायावरिक बनेका छन् ।
जीवन-मृत्यु रहस्यको गर्भबाट शून्यतातर्फको चिन्तनमा पैताला केन्द्रित भएको छ । उच्च बौद्धिक पाठकको अपेक्षा उपन्यासले राखेको छ । साधारण पाठकलाई पाचन चूर्णको आवश्यकता देखिन्छ ।
न्यारेटरकृत ससाना किस्साहरूको सिंगो फटिक हो- पैताला । सृष्टिकै पहिलो खुड्किलो हो- पैताला । मानव सभ्यताको जन्मसँगै सबैभन्दा प्राचीन अपितु अर्वाचीनमा स्थापित दर्शन हो- पैताला । तन्त्र-मन्त्र-यन्त्रको चेन अफ कमान्डमा स्थापित कमान्डो हो पैताला । लेखक स्वयंको स्मृति र विस्मृतिको भण्डार हो- पैताला । अनेकौं सांस्कृतिक-तान्त्रिक विधिको एउटै स्तम्भ हो- पैताला । इतिहास, दर्शन र मिथकको फ्युजन हो- पैताला । मानव सभ्यताको इतिहास, पूर्वीय-पाश्चात्य दर्शन, ज्ञान-विज्ञान साथै सांस्कृतिक तथा पौराणिक मिथकमा पैताला बुनिएको छ । यसैमा क्यारेक्टर, प्लट र टाइमिङ सेट गराएको छ । फिक्सनको डिक्सन (भाषा) पनि उसैगरी तुनिएको छ ।
कथाको मुख्य खोज, (१) सञ्जीवनी विद्याको सिद्धि र (२) एनएचसिक्ससीवाई (चिस्याउने अणु) को सफल प्रयोग गर्नु हो । यसको लागि उसले तन्त्रको सिम्बोलिक प्रयोग गरेको छ र अल्जाइमरको सिकार बनेकी न्यारेटर स्त्रीकालाई उपस्थित गराएर आख्यानकारको छाया पात्र जोस्मणिलाई उपर्युक्त जिम्मा लगाइएको छ । सिंगो आख्यान अलेक्जेन्डर वालेटले जोस्मणिको नाउँमा लेखेको ६ वटा चिठीको केन्द्रियतामा विसर्जन भएको छ ।
यही चिठीको रहस्योद्घाटनमा सम्पूर्ण आख्यानिक जालो बुनिएको छ । जहाँजहाँ चिठी छोडिएको छ, तहाँतहाँ एउटा न एउटा विचित्र घटना जोडिएको छ । कसलाई कहाँ हुत्याउने, कसलाई कहाँ तन्काउने, कसलाई कहाँ भर्ती गराउने, कसलाई कहाँ दिवंगत गराउने आदि महान् षड्यन्त्र आख्यानकार र स्त्रीका न्यारेटर बसेर सेटिङ गरिएको छ । यसले गर्दा पाठकलाई रहस्य बुझ्न समस्या नपरिजाला । बाठो छ आख्यानकार । पाठकलाई फकाई-फकाई लैजान्छ र गुमनाम बनाइदिन्छ । अल्झाइदिन्छ घरिघरि अनि आपंैm भन्छ- मैले गलत गरेँ, माफ पाऊँ है । हामी प्रस्ट बुझ्न सक्छौं, आख्यानकार चिठीको खोजमा निस्कने एकमात्र उद्देश्य 'पैताला दर्शन'को सफल प्रयोग हो । जहाँ-जहाँ चिठी पुग्छ, तहाँ-तहाँ पैताला पुग्छ । जसकै बलमा कथाहरू बुनिएका छन् । कथाहरू सुनिएका छन् ।
सिंगो प्लटमा लाहुरे संस्कृति, जनकपुर धामको कुण्डीय बयानमात्र होइन हिमाल, पहाड र तराईका आदिम संस्कृति र मिथकीय पहिचानको खोजी पनि गरिएको छ । सुन्दरी प्रोडक्सनका बागी क्यारेक्टर लोथिराको भनाइ सौन्दर्यको सापेक्षित वकालत हो । लोथिरा भन्छे, 'आँखा चिम्लनोस् । आँखाले नै मान्छेले आफ्नो अवधारणा बनाउँछ । आँखाले नै मान्छेले सौन्दर्य चेतना निर्माण गर्छ । आँखाबाटै मान्छेले आधा विश्वास बनाउँछ । आँखाबाट प्राप्त विश्वास र सौन्दर्य चेतनाबाट मुक्त नभईकन मान्छे प्राकृत हुन सक्दैन ।' आजको कथित मिडिया सुन्दरीका अगाडि संसारकै कुरूप मानिएकी लोथिराको उपर्युक्त भनाइ आफैंमा गतिलो झापड हो ।
माथिका सन्दर्भ पैतालाका मूल सन्दर्भ हुन् । उठाइएका विषयवस्तु हुन् । पैतालासँग अनेकौं प्रश्न छन् । उत्तरहरू छन् । डेरिडाले मानेको टेक्स्ट सत्यभन्दा माथि मिचेल फुकोको टेक्स्ट बाहिरका छरपस्ट विचारहरू आख्यानमा पाइन्छन् । आख्यान क्यारेक्टर कामरेड प्रचण्ड भन्छ, 'जोस्मणि बाबु, संसारका सबै प्रश्नको उत्तर हुँदैन । वास्तवमा जीवनमा महत्वपूर्ण प्रश्नहरू तिनै हुन्, जसको उत्तर मान्छेलाई थाहा हुँदैछ ।' यो सत्य हो।
भनेर-जानेर सबै कुरा सकिँदैन । आज हामी असाध्यै विद्वान् भइटोपलेका छौं । हामीलाई थाहा नभएको केही पनि छैन । थाहा भएको केही पनि छैन । भर्चुअल प्रविधिले हामीलाई स्वयंमा महान् विद्वान् साबित गराइदिएको छ । यो पनि हामीलाई थाहा छ- पूर्वीय सभ्यता, दर्शन, ज्ञान-विज्ञानको मुख्य विधान वेदलाई केलाउँदा-केलाउँदै शंकाराचार्यले दाह्री फुलाए । मर्ने बेलामा घोषणा गरिदिए- ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या ।
'म दिनदिनै डिप्रेसनको सिकार हुँदै गएको छु । यस्तो लाग्न थालेको छ, म मेरै पात्रको वजनले थिचिएर मर्दै छु', बारम्बार आख्यानकारलाई यही डरले सताइरहेको छ । कतिपय ठाउँमा उपन्यासको पाना तन्किएको छ । दिवंगत श्रीमती सारिका, जुलुम लामा, माक्सोती बूढी, ठकवक भएर उभिएका मौनी बाबा, इडा र पिङ्ला, पागौलिया आदि क्यारेक्टरको किस्सामा भौतारिएको छ न्यारेटर । पात्रहरूको व्यवस्थापन गर्दागर्दै पात्रकै वजनले च्यापिएको छ । कतैकतै यिनले बनाएको रिसर्च डिजाइन फंक्सनलेस भएको छ । सामग्री थुपारिदिन्छन्, वर्गीकरण पनि गरिदिन्छन् तर भेरिफिकेसन (सत्यापन) को अभाव देखिन्छ । को कहाँ उत्रने ? को कहाँबाट चढ्ने ? अत्तोपत्तो केही हुँदैन । यति हुँदाहुँदै पनि आफ्ना पाठकहरू नबिच्कियून् भन्ने चेत यिनमा छ ।
एउटा बजारिया आरोप छ- नगरकोटीले निल्यो गनेसलाई । तर पैताला पढिसक्दा कतै कदाचित् त्यस्तो अनुभूति हुँदैन । तर 'नगरकोटी' र 'गनेस' एउटै स्कुलका विद्यार्थी भने देखिन्छन् । दुवैले परम्परागत नेपाली कथावाचनको शैलीलाई चुनौती दिएका छन् । रहस्य र स्वैरकल्पना दुवैको मिलनबिन्दु हो । यिनका गुरु एउटै छन् ः जस्तै गाब्रियल ग्रासिया मार्खेज । जसको छत्रछाहारीमा यिनीहरू बेलाबेला उफ्रिरहेका छन्, भारतवर्षको नेपालखण्डमा । एउटा घाटतिर गएर तपस्या गर्छ अर्को हिमालतिर । यी दुवै बडे मिया-छोटे मिया हुन् जसले उत्तरआधुनिकताको म्यानभित्र जादुमय-यथार्थको तरबार नचाइरहेका छन् । यी दुवै आदिम क्यारेक्टरका भुताहा स्वामी हुन् । स्वयंमा फकिर हुन् । गोत्रविहीन । गृहविहीन ।
समकालीन आख्यानमा पाइने प्रेम र यौनको बोलवालभन्दा माथि उठेको छ 'पैताला' । जीवन-मृत्यु रहस्यको गर्भबाट शून्यतातर्पmको चिन्तनमा यो केन्द्रित भएको छ । उच्च बौद्धिक पाठकको अपेक्षा उपन्यासले राखेको छ । साधारण पाठकलाई पाचन चूर्णको आवश्यकता देखिन्छ । यद्यपि नाटकीय संवाद र पूर्वदीप्तिमा वर्णित संस्मरणात्मक कहानीले उपन्यासको ओजलाई जीवन्त तुल्याएको छ । प्रचलित स्वादभन्दा भिन्न स्वाद उपन्यासका पाठकले चाख्न जरुर पाएका छन् ।
साना किस्साहरूको तन्तुबाट निर्मित पैतालाको पाठकीय धैर्य उस्तै हुनुपर्छ जस्तो धैर्य जोस्मणिको छ । पागौलिया चरित्र नबोकेसम्म उपन्यासको पठनले चरमोत्कर्षमा पुर्‍याउँदैन । बीचबीचमा पाठकको धैर्य टुट्न सक्छ, जसरी जोस्मणिको ध्यान टुटेको छ गुफामा पुगेपछि । यही भएर आख्यानकार बीचबीचमा पाठकलाई सम्झाउँछ, यसको पूर्वापर सम्बन्ध फलानो-फलानो हो... ।
'पैताला' दर्शन नयाँ आविष्कार भने होइन । यद्यपि दर्शनकै रूपमा स्थापना नगरिएको र अज्ञातप्रायः रहेको स्थितिमा यसलाई आख्यानकारको ब्रह्मले उत्खनन गरिदिएको जरुर हो । यसलाई उनले दर्शनको रूपमा स्थापित गर्न खोजेका छन् । पूर्वस्थापित दर्शनको खण्डन-मण्डन गर्दै आफूले पैताला दर्शन स्थापना गर्नुको औचित्य र महत्वको पुष्टि गर्ने चेष्टा गरेका छन् । उनले वालेटको प्रयोगशालामा बसेर सञ्जीवनी विद्याको सिद्धि र एनएचसिक्सिवाईको व्यावहारिक प्रयोग सफल तुल्याउन सके भने पैतालाले नयाँ उचाइ कायम जरुर गर्नेछ ।
यिनले प्रयोग गरेको स्वैरकाल्पनिक तथा उडन्ते टेक्निक आख्यानको क्षेत्रमा माध्यमिककालीन समयका आख्यानकार गिरीशवल्लभ जोशीको 'वीरचरित्र' अथवा आधुनिक आख्यानकार धु्रवचन्द्र गौतमका 'अलिखित', 'अग्निदत्त+अग्निदत्त' जस्ता उपन्यासमा पनि पाइन्छ । 'ठकवकतन्त्र'को खोजी यिनको मौलिक खोजी हो । यसले हामीसँग भएका प्राचीन संस्कृतिको उत्खनन गरेको छ÷गर्न आह्वान गराएको छ । बाँकी पाठकको अदालतले पनि सुझाउनेछ । लेखकको आगामी पुस्तकले पनि यिनको दर्शन दीर्घकालीन दर्शन हो÷होइन भन्ने पुष्टि जरुर गर्नेछ ।
अन्नपूर्ण पोष्ट, फुर्सद
०३ असार २०७४ १०:३०:५८